Dalka Qadar ayaa maanta oo talaado ah waxa uu maamulka gobolkan Banaadir ku wareejisay 30 ka mid ah gawaarida basaska waaweyn ah – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Dalka Qadar ayaa maanta oo talaado ah waxa uu maamulka gobolkan Banaadir ku wareejisay 30 ka mid ah gawaarida basaska waaweyn ah
Allhadaaftimo April 17, 2018 April 17, 2018 Uncategorized
Dalka Qadar ayaa maanta oo talaado ah waxa uu maamulka gobolkan Banaadir ku wareejisay 30 ka mid ah gawaarida basaska waaweyn ah, kuwaas oo dhowr maalin ka hor laga soo dejiyey dekada magalada Muqdisho.
Gawaaridaan basaska ah ayaa waxaa loogu talo galay in maamulka gobolka Banadir uu ugu adeego shacabka degan 17-ka degmo ee gobolkan Banaadir uu ka kooban yahay, sida ay sheegeen masuuliyiinta maamulkaee maanta basaskaasi la wareegay.
Safaarada dowladda Qadar ay ku leedahay magaalada Muqdisho ayaa wareejisay basaskan taas oo uu munaasabadeedu ka dhacday isla dekedda Muqdisho.
Basaskan ayaa inta dowladda hoose ee Xamar ka qaadatay marka laga reebo inta kale waxaa la filayaa in lagu wareejiyo maamul goboleedyada dalka ka jira.
Wasiirka ku xigeenka wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya Cusmaan Maxamed Cabdi (Daalo) ayaa ka hadlay goobta , waxaana uu uga mahadceliyay dowladda Qadar taageerada ay mar walba la garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed.
Previous Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in lacagtii 8-dii bishan lagu qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho qeyb ka mid ah loogu tala galay Ciidamada Puntlan
Next Wasiirul dawlaha wasaarada arimaha dibada ee dalka Imaaraadka carabta oo maanta la Hadley idaacada BBC-da ayaa waxaa uu sheegay in heshiiska Dekada Berbera ee Dp World iyo Somaliya ay ogolaatey dawladii hore